Ra’isul wasaaraha Britain oo ballan qaaday xakameynta Muhaajiriinta – idalenews.com
Ra’isul wasaaraha Britain oo ballan qaaday xakameynta Muhaajiriinta
Ra’isul Wasaaraha Dalka Britain David Cameron, ayaa sheegay in mudadii uu xilka hayay uu wax badan ka qabtay qulqulka Muhaajiriinta Shisheeyaha ee buux dhaafiyey dalka Britain.
David Cameron ayaa hadalkaasi ku sheegay Warqad furan oo u diray Akhristayaasha Wargeyska (Thurrock Gazette) ee ka soo baxa Degmada Thurrock ee dalka Britain.
Ra’isul wasaaruhu waxa uu sheegay inay Xukuumaddiisa dadaal xoogan u gashay sidii loo yareyn lahaa xaddiga Muhaajiriinta ee sannad kastaba yimaada Dalka Britain.
Isaga oo arrintaa ka sii ambaqaadaya ayaa waxa uu sheegay in labadii sanno ee ugu dambeysay ay hoos u dhigeen tirada Muhaajiriinta, isla markaana ay xayireen Fiisaha Qoysaska (Family Visas).
” Tirada todobaadkii hore waxay ka muuqday hoos u dhac ku yimid tirada Muhaajiriinta, tani iyo doorashadii hore” ayuu yiri David Cameron, isaga oo intaa ku daray in mudadii uu Xafiiska joogay ay Britain soo galeen 2.2 million oo Muhaajiriin oo qaarkood dib uga laabtay Britain.
Maruu ka hadlayay Cabashada dadka ku nool Degmadda Thurrock, waxa uu tilmaamay inay ku nool yihiin inkabadan 900 oo Dhalinyaro oo aan shaqa heysan, isagoo sheegay inaysan Muhaajiriinta marnaba keenin dhibaatada jirto, balse ay mararka qaarkood xaaladda ka dhigaan mid aad u culus.
David Cameron wuxuu sheegay in 65 sanno ka hor ay 500 oo Muhaajiriin ka timid Dalka Jamaica oo nolol wanaagsan doonayay ay yimaaden Boqortooyada Britain.
David wuxuu qoraalkiisa isku weydiiyay haddii ay Madaxdii Xisbiga Shaqaalaha (Labour Party) ay cashar ka qaateen Dhacdooyinkii hore, wuxuuna isugu jawaabay inay diideen inay xukuumadda dib u eegto Arrimaha Muhaajiriinta.
”Sannado kadib oo Xisbigii Labour Party koontorooli waayay Muhaajiriinta, ayuu wuxuu dalka u baahday inuu Xisbiga Consevatives qabto Majaraha Dalka, oo wax ka qabto nidaamka Muhaajiriinta” ayuu yiri David Cameron, oo intaa ku daray inay sameeyen wixii saxda looga baahnaa.
Wuxuuna mar kale balanqaaday inuu yareenayo tirada muhaajiriinta soo gasho Dalka Britain.
FALLO:- Rajadda Ciiddamadda Somaliya ee qaadista Xayiraada Hubka
Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo maalinimada berri daah furaya dib u eegista dastuurka